Maxaa ka soo baxay kulankii raisulwasaare Cumar Cabdirashiid & hogaamiyaasha maamulada Puntland & Jubba |
Maxaa ka soo baxay kulankii raisulwasaare Cumar Cabdirashiid & hogaamiyaasha maamulada Puntland & Jubba
Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa kulanka Seddex geesoodka ah Madaxtooyada Puntland uga socdo Ra’isul wasaaraha dalka Cumar C/rashiid, Hogaamiyaasha Maamul goboleedyada Jubba iyo Puntland.
Ra’isul wasaaraha oo ku biiray kulanka ayaa la sheegayaa in Labada Madaxweyne uu kala hadlay sidii xal loogu raadin lahaa qilaafka waxa uuna hordhigay in Dowlada ay ka qafiifiyaan qeylada iyo mucaaradka aan sal iyo baar ku laheyn Nidaamka Somalia loogu baadi goobaayo Federaaliisimka.
Sidoo kale Sharmaarke iyo Labada Hogaamiye ayaa si hordhac ah isula arkay in xalka uu yahay mid ku jira in lagu wada hadlo miiska korkiisa si aysan usii buuran qilaafka hada u muuqanaayo mid kusii baahayo dalka.
Labada Hogaamiye ayaa Ra’isul wasaaraha u sheegay inay diyaar u yihiin in xal laga gaaro ka gudbida muranka ka taagan Mudug iyo kala dirista Baarlamaanka Jubba, waxaana arintaasi si diiran usoo dhaweeyay Ra’isul wasaaraha dalka oo ogaaday sida sahlan ee xalku uu ku jiro maadaama ay labada hogaamiye qaaten in xal laga gaaro buuqa taagan.
Kulanka Seddex geesoodka ayaa qaadan doono mudo afarta cishe ee soo socta, iyadoona maalin waliba ay xal kawada gaari doonaan ilaa 2 qodob oo kamid ah qodobada uu ka dhashay qilaafka taagan.
Ra’isul wasaare Cumar Cabdirashiid ayaa lagu wadaa in uu gaaro Magaaladda Qardho si halkaasi uu kulamo gaar gaar ah kula soo qaato Salaadiinta Puntland oo halkaasi isu uruursanaayo.
Ujeedka uu Qardho u tagaayo ayaa ka mid ah in qorshayaasha ay isla gaaren Masuuliyiinta waxa ayna isla arkeen in xal badan laga gaaro qilaafka u dhexeeya Dowladda Federalka iyo Maamulada xubnaha ka ah kuwaas oo in badan qilaafka u dhexeeya uu soo noq noqday.
Shalay ayaa lagu waday in maamulk goboleedyada Puntland iyo Jubbaay wadda jir u soo saaraan qoraalo ay si wada jiri ah u saxiixeen kaas oo ku saabsan qilaafka u dhexeeya Dowladda Federalka iyo Maamuladda.
Balse socdaalka Ra’isul wasaare Cumar ayaa dib u dhigay in qilaafka xal laga gaaro, waxa uuna inta uu ku sugan yahay Puntland la filayaa in la soo dhameystiro.